Sacuudiga oo ganaaxaya dadka u dhuunta Xajka – Radio Damal
Sacuudiga oo ganaaxaya dadka u dhuunta Xajka
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Sacuudi Carabiya ayaa xaqiijiyay inuu soo rogi doono sharci ganaax lacageed ah, kaasi oo la dul-dhigayo dadka jabiya shuruucda geliddda magaalada Maka.
Qofka lagu arko goobaha barakeysan isagoon ogolaasho haysan waxaa lagu ganaaxi doonaa aduun lacageeed oo dhan 2,666 oo doolar.
Tallaabadani ayaa looga gol-leeyahay in lagu meel mariyo sharciyada lagu xaddiday tirada dadka sannadkan xajinaya taasi oo looga hortagayo faafidda fayraska corona.
Warbixin ka soo baxday Wasaaradda Arrimaha Gudaha Boqortooyada ayaa lagu sheegay in ganaaxaasi uu dhaqan-geli doono laga bilaabo 19-ka bishan July oo ku beegan 28-ka Dhul Qadah) wuxuuna socon doonaa ilaa bisha Ogosto labadeeda.
Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in ganaaxa lacageed uu laba laabmayo haddii xad-gudubkaasi marlabaad qofka lagu qabto.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ka mamnuucday dadka debedda ah in ay soo xajiyaan sannadkan, si ay u xakameeyaan fiditaanka feyraska Karoona.
Kaliya tiro aad u kooban oo hadda ku nool boqortooyada ayaa kaqeyb gudan doonta waajibaadkaas, ayaa lagu yidhi bayaan ay soo saartay warbaahinta dowladda.
Qiyaastii laba milyan oo qof ayaa haddii kale booqan lahaa Maka iyo Madiina xagaagan si ay uga u soo xajiyaan waajibadkan sannadlaha ah ee diinta Islaamka.Waxaa jirtay cabsi laga qabay in Xajka gebi ahaanba la baajiyo.
Waqtiyada caadiga ah ee Xajka ayaa ka mid ah waqtiyada ugu muhimsan jadwalka taariikhda diinta Islaamka. Laakiin kaliya muwaaddiniinta ka kala socota dalalka adduunka ee horeyba u degganaa Sucuudiga ayaa loo oggolaan doonaa inay ka soo qeyb galaan sannadkan.
Mas’uuliyiinta ayaa sheegaya in tani ay tahay habka kaliya ee ay awood ugu yeelan karaan sameynta qorshayaal ay dadku ku kala fogaynayaan, taasoo dadka ka dhigi doonta inay si nabada u cibaadaystaan
Sacuudi Carabiya waxay diiwaangelisay 161,005 xaaladood oo cudurka Karoona ah iyo 1,307 dhimasho ah.
Waa maxay Xajku?
Xajka gudashadiisu waa ugu yaraan hal mar waana mid ka mid ah Shanta tiir ee Shareecada Islaamka – shantaas waajib oo ah ah in qofkasta oo muslim ah, oo caafimaadkiisu wanaagsan yahay isla mar ahaantyaana awoodi kara, ay tahay inuu falo si uu ugu noolaado nolol wanaagsan, sida ay qabto diinta Islaamka.
Xajka ayaa loo aadaa magaalada Makka si ay dadku u hor istaagaan dhismaha loo yaqaan Kabcada, iyagoo falaya cibaadooyin loogu talo galay oo ay ka mid tahay in la ducaysto.